CWP - Web Hosting အတွက်အခမဲ့ Control Panel ကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Linux မှ
CWP - အခမဲ့ Web Hosting Control Panel ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
CWP - Web Hosting အတွက်အခမဲ့ Control Panel ကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ပေါ်မှာငါတို့ယခင်ဆောင်းပါးပြီးနောက် «CWP» နှင့်အခြားသူများ «Paneles de Control» အတွက် «Web Hosting» ကိုခေါ် "CWP (CentOS Web Panel) - ဝဘ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခမဲ့ထိန်းချုပ်ရေးနေရာ"ဤအရာ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ်နက်နက်နဲနဲဖြေရှင်းမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်သည် Web Hosting အတွက်အခမဲ့ Control Panel အဖြစ်လူသိများ «CWP»လည်းခေါ် «CentOS (Control) Web Panel».
ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ «CentOS (Control) Web Panel» ကြွင်းသောအရာကဲ့သို့ «Paneles de Control» ကျွန်တော်တို့ကိုရှိပြီးသား စီမံခန့်ခွဲထားသောဆာဗာတစ်ခုစီအတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲထားသောဆိုဒ်များအားထိရောက်ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ အထူးသဖြင့် «CWP» တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ ၏မြန်ဆန်လွယ်ကူသောအုပ်ချုပ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ «Servidores (Dedicados y VPS)» (CentOS နှင့်သာ) အချို့သောရှုပ်ထွေးသောအလုပ်များ၏အားထုတ်မှုကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အခြားအားသာချက်များစွာရှိသည်။
ယခုလျှောက်လွှာအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည် CWP တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ကမှတဆင့်စမ်းသပ်ဖို့ရရှိနိုင် link တစ်ခုလက်ရှိတွင်ရှိပါတယ် Demo ဝက်ဘ်စနစ်။ အရာအောက်ပါ parameters တွေကိုအရသိရသည်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်:
root / admin ရဲ့ Panel ကို Login
SSL မဟုတ်သော Login: https://79.137.25.230:2031
အသုံးပြုသူအသစ်အကောင့်သစ်ဝင်မည် (Youtube ကိုဗီဒီယို)
SSL မဟုတ်သော Login: http://demo1.centos-webpanel.com:2082
SSL ဝင်မည်: https://79.137.25.230:2083
အသုံးပြုသူအမည်: testacc ပါ
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုမည် 3.20 ဗားရှင်း တစ် ဦး ကိုမှန်ကန်နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ installation ကို၏ «Control Web Panel».
1 Web Panel ကိုထိန်းချုပ်သည်
1.1.1 CWP ဆက်တင်များ
1.1.3 domains များ
1.1.4 SQL ဝန်ဆောင်မှုများ
1.1.6 DNS လုပ်ဆောင်ချက်များ
Web Panel ကိုထိန်းချုပ်သည်
ပြီးတာနဲ့ install လုပ်ပြီး configure လုပ်ပါ «CWP»ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးအကြိမ် log in လုပ်ရန် web မှတဆင့်ဖွင့်သည် ရိုးရှင်းပြီးပွတ်အသုံးပြုသူ access ကို interface ကိုဘယ်မှာသာနာမကိုအမှီ «Usuario (Username)» နှင့်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ «Contraseña (Password)» ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြီးအောင်ရန် «Entrar (Login)»။ အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။
ပြီးတာနဲ့အတွင်းပိုင်းသည် «CWP»အသုံးပြုသူကိုပြသသည် အဓိကမျက်နှာပြင် ဒါဟာကိုခေါ်«Tablero». အောက်ပါအချက်အလက်များကိုပုံသေအားဖြင့်ပြသသည်။ နောက်ဆုံး ၀ င်ရောက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ စီမံကိန်း (site) ၏အသုံးပြုမှုညွှန်းကိန်းများနှင့်အစီအစဉ်၏အချက်အလက်များ (ဒိုမိန်းအမည်၊ ဒိုမိန်း၏ IP နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော Hosting ၏ DNS ဆာဗာများ။ ။ ညာဘက်ထိပ် သတင်းအချက်အလက်ကိုပြသသည် အသုံးပြုသူအထဲဝင်ပြီး၊ ပြင်ဆင်ထားသောဘာသာစကား ပြောင်းလဲနိုင်သည်, နှင့်တစ် ဦး setup button ကို မှပြောင်းလဲရန် interface themes များရရှိနိုင်ပါက။
အီးမေးလ်အကောင့်များနှင့် DNS အင်္ဂါရပ်များ
သင်တန်ဖိုးထားနိုင်သကဲ့သို့ «CWP»ပြီးပြည့်စုံကောင်းမွန်သောအခမဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည် အရာမဆို၏လိုအပ်ချက်များအများစုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည် ဝဘ်ဆိုက်မန်နေဂျာ။ ပြီးတော့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ «CWP» တကယ်မဟုတ်ဘူး «Software Libre» ကမဆိုမူကွဲများကဖုံးလွှမ်းမပေးကတည်းကကတည်းကသူ့ဟာသူ «Licencia Publica General de GNU» (GNU အထွေထွေပြည်သူ့လိုင်စင်သို့မဟုတ် GNU GPL သို့မဟုတ် GPL သာဖြစ်သည်)
သို့သော်၎င်းကိုမျှဝေခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တရား ၀ င်ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲအသုံးပြုခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည် ၎င်းတွင်၎င်း၏အခမဲ့ဗားရှင်းတွင်လိုင်စင်မရှိပါ. နောက်ပိုင်းဆောင်းပါးများတွင်ဤလျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်အသုံးပြုခဲ့လျှင် «CWP», မှတ်ချက်များမှတဆင့်သင့်အတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါရပ်ရွာ၏အသိပညာကြွယ်ဝစေရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » CWP - အခမဲ့ Web Hosting Control Panel ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဒီဘလော့ဂ်ဖန်တီးသူများအတွက် hahaha ကမှတ်ချက်။ ငါဟာအခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ရဲ့နာမည်နဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလို့မရဘူး၊ ဒါကရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာပါ။
အသုံးပြုသူ NAZA hehehe အတွက်တောင်းသည်
GTA - ယူနတီကို San Andreas မှပြန်လည်အသုံးပြုသည် - အသစ်အသစ်များရရှိနိုင်သည်
Webrender တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ Firefox 69.0.3 update ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်